३६ जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा सार्वजनिक (नतिजासहित) - Everest Dainik - News from Nepal
३६ जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा सार्वजनिक (नतिजासहित)
काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक तहको खुला तर्फको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने क्रममा बिहीबार दिउँसोसम्म ३६ जिल्लाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले गत असोज १३ गते लिएको प्रा.वि तहको परीक्षाको नतिजा गत साताको मंगलबारदेखि सार्वजनिक गर्न सुरु गरेको हो । बिहीर दिउँसोसम्म कुन–कुन जिल्लाको नतिजा सार्वजनिक भयो? हेर्नुस्
याे पनि पढ्नुस ‘साइड जब’ का कारण शिक्षिकाको जागिर चट् !
याे पनि पढ्नुस सुविधा लिने अस्थायी शिक्षकको विवरण माग
याे पनि पढ्नुस ६८ जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा सार्वजनिक (नामसहित)